မိုးရာသီမှာ အေးဆေး Chill လို့ကောင်းတဲ့ ကော်ဖီဆိုင် (၆) ဆိုင်
Name * Name Required!
Email * Email Required ( [email protected] )!
ယနေ့ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေး : 1,572,000 Ks ( တစ်ကျပ်သားလျှင် )
ယနေ့ပြည်တွင်း ၁၅ ပဲရည်ရွှေဈေး : 1,479,500 Ks ( တစ်ကျပ်သားလျှင် )
ယနေ့ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး : 1,788 USD ( တစ်အောင်စလျှင် )
ယနေ့ ရန်ကုန် Octane 92 ဈေးနှုန်း : 1035 Ks
ယနေ့ ရန်ကုန် Octane 95 ဈေးနှုန်း : 1055 Ks
ယနေ့ ရန်ကုန်း Premium Diesel ဈေးနှုန်း : 1020 Ks
ယနေ့ ရန်ကုန် Diesel ဈေးနှုန်း : 1020 Ks
ယနေ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်း : 1,634 Ks
ယနေ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်း : 1,170 Ks
ယနေ့ ယူရိုငွေ လဲလှယ်နှုန်း : 1,915 Ks
Shopping & Promos
Aung Myo Hein 17 Jun, 2021
အိမ်တွင်းအောင်းပြီး စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား အပြင်မှာ ပျော်စရာတွေကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ လူပင်ပန်းတာထက် စိတ်ပင်ပန်းတာက ပိုဆိုးပါတယ်။ စိတ်ထောင်းလို့ ကိုယ်ကျင် ဆိုသလို စိတ်ကို အနားပေးဖို့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးချသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝါသနာပါတာတွေကို လုပ်ပြီး စိတ်ကို အာရုံလွှဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က စာအုပ်လေးဖတ်၊ ကော်ဖီခွက်လေးနဲ့ နေတတ်တဲ့သူဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့ Cafe ဆိုင်လေးတွေကို ရွေးချယ်ပါ။ အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ တွေ့ပြီး Game ဆော့တတ်တဲ့သူဆိုရင် Chill လို့ရမယ့် Cafe ကိုရွေးပါ။
ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ပြီး စကားတွေပြောချင်တဲ့ သူဆိုရင်လည်း Cafe ကိုပဲရွေးပါ။ ဘာလုပ်လုပ် Cafe ကိုပဲရွေးပါ။ မသိဘူးစားမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေလည်း ရွေးမယ်ဆို Cafe တွေရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းပြီး ဘော်ဒါလော်ပါတွေနဲ့ သာသာယာယာ ပျော်ပါးလို့ရမယ့် Cafe ဆိုင်လန်းလန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) W Bistro
အခုလို မိုးရာသီမှာ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ ကော်ဖီလေးသောက်ဖို့ဆိုရင် W Bistro ကို သတိရလိုက်ပါ။ ဆိုင်ရဲ့ အကျယ်အဝန်းကလည်း အနေတော်ဆိုတော့ Table တွေကြပ်မှာ မပူရတဲ့အတွက် အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ။
ဆက်သွယ်ရန် - 09 40771 8616
လိပ်စာ - Ground Floor, Winner Inn, No 42 Than Lwin Road, Bahan Township Yangon
Facebook Page - Link Here
(2) Kafe In Town
ဆိုင်ရဲ့ အပြင်အဆင်ကြောင့် ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်က မနက် (၇) နာရီကနေ ည (၁၁) နာရီထိဖွင့်တဲ့အပြင် ကော်ဖီလေးသောက်၊ မုန့်လေးစားပြီး အလုပ်အေးဆေး လုပ်လို့ရမယ့် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် - 09 781 888838
လိပ်စာ - Corner of Pansodan st & Konthel st Yangon
(3) Rangoon Tea House
Coffee Date မယ်ဆိုရင် ဒီဆိုင်လေးက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး အစားအသောက်တွေကလည်း ရှယ်ကောင်းပါတယ်။ ဆိုင်က လူအမြဲပြည့်နေတတ်တာကြောင့် Booking လေးကြိုလုပ်သွားတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
Rangoon Tea House (Pansodan Rd)
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - 6:30am to 6:30pm
ဆက်သွယ်ရန် - 09979078681
Rangoon Tea House (Golden Valley)
ဆက်သွယ်ရန် - 09880168318
ကိုယ်စီ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူတွေကို အပေါ်ကနေကြည့်ရင်း ကော်ဖီသောက်ရတာက ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ ခံစားမှုတစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီလို ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားချင်ရင်တော့ Rio မှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် - 09 40778 8100
လိပ်စာ - 2nd Floor, Sule Pagoda Road Yangon
(5) CoFree Coffee
ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆန်းတာမို့လို့ အေးရာအေးကြောင်း စကားပြောလို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် - 09 798 776068
လိပ်စာ - No.6, Shin Saw Pu Pagoda Road, Sanchaung Yangon
ကျောက်မြောင်းမှာရှိတဲ့ ဒီဆိုင်လေးက Chill ဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ ဆိုင်တွေထဲက တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး တိတ်ဆိတ်တာကြောင့် စာအုပ်ဖတ်တာ၊ အလုပ်လုပ်တာတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် - 09 40722 5558
လိပ်စာ - 44 Seikta Thukha St, Kyauk Myaung, Tamwe Tsp Yangon
ကလေးရော လူကြီးပါ ကြိုက်ကြတဲ့ ပုဇွန်တန်ပူရာ ကြော်နည်း
Wai Yan Kyaw3Oct, 2020
ဟော့ပေါ့ဘူဖေးကို ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ အတန်ဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုစားမလဲ...?
Aung Myo Hein3Oct, 2020
ကပ်ကြီးပြီးရင် ကလပ်ကြီး ဒိုးမယ့် အစား မဖြစ်မနေ သွားသင့်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Cafe ဆိုင် (၅)ဆိုင်
Aung Myo Hein 8 Dec, 2020
ကြက်ခြေထောက်နဲ့ ဘာကြောင့် Chill သင့်တာလဲ?
Wai Yan Kyaw6Jan, 2021
လူကြိုက်များတဲ့ ကိုရီးယားအစားအစာတွေကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Wai Yan Kyaw 24 Jun, 2021
ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ရင် မဖြစ်မနေမြည်းစမ်းသင့်တဲ့ အစားအသောက် (၆) မျိူး
Aung Myo Hein 22 Jun, 2021
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး လူကြိုက်အများဆုံး Soup (၆) မျိုး
Aung Myo Hein 16 Jun, 2021
What's Happening In Yangon
Activities To Do In Yangon
Shopping & Promo
The Best Shops By Products
Weekly Promotions By Top Brands
Best Shopping Locations In Yangon
What's on this week in Cinemas?
Best Nightlife Locations
Best Food Deals
Trending Fashion & Styles
Trending Hairstyles & Color
Best Gyms in Yangon
Healthy Eats & Diet
Best Gym Workouts
© 2021 MY Yangon All Rights Reserved.